चिन्तन चौतारी: 2011
सत्य र सपनाहरु
समाज - तितो सत्य बोल्छ
यथार्थवोध शुन्यता होईन
सुनौलो सुरुवात हो ।
तिमी कहिल्यै म हुन्नौ
न त म नै तिमी बन्न सक्छु
भिन्नै हुन ‘जिन’ र 'क्रोमोजोम' नै
र त, फरक-फरक छन
हाम्रा अस्तित्व र सपनाहरु ।
आफ्नै बिरुद्ध नऊभिने
असहमतिकै कारण शायद
मसँग सहमत भएनौ क्या रे!?
हो, तुहिने हरेक सपनाको
म सदैव बिपक्षी नै हुँ ।
केही हुर्किन्छन, केही मर्छन
फैसलामा राजी छु
म सहज स्विकार गर्छु
जसरी गरेथें तिम्रो प्रेमलाई ।
अती प्रिय लाग्छन
मलाई आफ्नै सपनाहरु
सबैलाई त्यस्तै त लाग्दो हो!
सम्बन्ध भत्केकै बेला
सपना ब्युझिन्छ कहिले काही
सपनाले एकान्त माग्छ
र, अन्तरात्मालाई सुन्छ ।
एक्लोको अर्थ अन्त होईन
न त एक्लोपन पिडा नै हो
एक्लो हुनु त कैलेकाही
सपनाको स्वामित्व जित्नु हो
स्वप्नहरुकै समिक्षा हुनु हो
गुमाएरै पनि अपुरो छैनौ कोही
रोजेका छौं आफ्नै सपनालाई
जिएका छौ आफ्नै अस्तित्वलाई
पाएको छौं आफ्नै पूर्ण जीवनलाई ।
१३ नोभेम्बर, २०११
Posted by Chandra Magar at 8:19:00 PM No comments:
चाहेरै न बोल्न मिल्यो, न त कतै देख्न पाएँ
यादमै जुनी बित्ने भयो, न त ब्यथा पोख्न पाएँ
मनभित्र के-के हुन्छ, कसले देख्न सक्या छ र !
हाँसोभित्र घाऊ हुन्छ, कसले पोख्न सक्या छ र !
घर हेर्छु अध्यारो छ, गाउँ हेर्छु सुनसान छ
वरिपरी उस्तै देख्छु, एउटै मान्छे गुमनाम छ
घर-गाउँ रुवाएर, अन्त बसाइ सर्यौ किन !
चाडै छाडि जानु रैछ, यती माया गर्यौ किन !
रुदा रुदै हाँस्न खोज्छु, हाँसोलाई बुवा ठान्छु
हाँस्दा हाँस्दै आसुँ झर्छ, आँशुलाई बुवा ठान्छु
जानेलाई त सजिलो भो, बाँच्नेलाई गाह्रो रै'छ
भुल्नेलाई त सजिलै भो, साँच्नेलाई साह्रो रै'छ ।
किउलीवाङको गोठमा, छैन कुनै खाट अब
भट्किएको गाह्रो लाउने, छैन कुनै हात अब
गाई-बाख्राका बगाल पनि, छिन्नभिन्न भईगए
दिमखोला र पोतल घुम्ने, मुल खसम कहाँ गए !
मध्यरातमा फेरन लुगा, लिन आ'को देखें बुवा
खुशी हुँदै ब्युझिएँ 'नि, दर्शन गर्नै पाइनँ बुवा
दिउसै आउन मिल्दैन र! लुकी-लुकी आउनु पर्ने
बिपना त दुखेकै छ, सपना 'नि दुख्नु पर्ने !
जाडो सुरु भयो कठै! चिसो बद्यो होला बुवा
लुलाएका हातखुट्टा ति, ऐले कस्तो होलान बुवा
कसो गरी सम्हाल्दै हुन्, परिवार छौं जम्मै यतै
किन रोजिस् इश्वर तैले, हाम्रै घरको असक्त नै !
हाम्रो खुशी देख्दा तँलाई, इर्श्या किन जाग्नु पर्ने!?
रुदै इश्वर नाम जप्दै, तँलाई किन दोग्नु पर्ने!?
सुख-दु:ख रचिस् तैले, सुख जती आँफै खोसिस्
सृस्टि त गरिस् तैले, कुदृष्टिले किन हेरिस् !?
२५ कार्तिक, २०६७
बिहान ०२:५५ बजे
Posted by Chandra Magar at 3:48:00 AM No comments:
पुष्पकमल दाहालले कार्तिक १५ गत्ते पुन: एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपाली राजनीतिको केन्द्र बिन्दु आफु नै रहेको जनाउ दिन सफल भए । अब सबैले के बुझ्नु पर्ने भो भने उनको पार्टीभित्र सर्वेसर्वा नेता उनी नै हुन्, न मोहन बैढ्य न त बाबुराम भट्टराई या अरु नै कोही । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि के पुष्टि गरिदिए भने सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणका लागि न बाधक हुन् न त साधक नै । क. प्रचण्डसँग बिपक्षीको सर्तहरु खुरुखुरु मानिदिएर पनि सहमति गर्न सक्ने बहुरङी खुबी छ भन्ने कुरा पछिल्लो सात बुँदे सहमतिमा छर्लङ देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो नेतागण र सभासद महोदयहरुले संबिधानसभाको समयसीमा सुरुमा २ बर्षलाई तोकेको भए पनि पटक-पटक म्याद थपेर जग हसाइरहेकै हुन् । फेरी पनि संबिधानसभाको थपिएको म्याद सकिन लागेको बेला अर्को नौटंकि रचेका त हैनन् !? भन्ने आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ नभएको होइन । जहिले पनि अन्तिम समयमा केही न केही बहाना बनाएर कुर्सीको लेनदेन गरिरहेकै हुन् । फेरी यस पटक पनि त्यही चालबाजी चालेका त होइनन्!? भन्न सकिदैन । हुन त जनताको आँखामा यसैगरी छारो कहिले पो हालेका थिएनन् र!? नेताले नेतालाई त सक्ने भए पो त हाल्थे र! फेरी अर्कोले चुपचाप सहिदिनु पनि त पर्‍यो नि हामी जनताले जस्तै । हालुन् के-के हाल्ने हुन्, छारो मात्र किन? दुंगा, मातो, बालुवा,.. जती अटाउछ सबै चिज हाल्दा नि हुन्छ क्या रे! हामीलाई त संबिधानसभा बिघटनको हाउगुजिले नै तर्साइरहेका हुन्, हामीलाई त सधैं संबिधानसभा प्यारो! हाम्रै अभिमत प्यारो! तर कहिलेसम्म ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
नेपालका राजनैतिक दलहरु प्रायजसो भित्र चाँही बैठक बसे झै गर्छन् अनी बाहिर निस्केर पत्रकारलाई जोस्सिदै भन्छन्, "आज कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएन, आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर भोली फेरी बैठक बस्ने सहमति गरिएको छ ।" सधैं जसो यही बनिबनाउ जवाफ दिने गर्छन्, बिना कुनै हिच्किचाहत । बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, त्यही टपर्तुईया कुराले नै मिडियामा पनि राम्रै स्थान ओगटिरहेको हुन्छ ।
कुनै पनि बिषयमा छलफल र बहस हुनु गौण हुन्, मुख्य चाँही सहि निष्कर्ष निकाल्नु नै हो । जसोतसो कन्दै र थुस्किदै बल्लतल्ल एउटा सहमति गरे । तर उनिहरुले के महशुस गर्नुपर्नेथ्यो भने यही बिषयमा सहमति गर्नुथियो त गिरीजा प्रसाद कोइराला जीवित हुँदै गरेको भए निकै उत्तम हुनेथियो । गिरीजाबाबुले गरेको प्रस्ताब पनि यही हुबहु नहोला तर योसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो । अहिले आएर के के न गरे जस्तो प्रचार गर्ने नेताहरुलाई त पुरुस्कार होइन सजाय दिनुपर्ने हो । अनायास मुलुकलाई स्वार्थको रण मैदान बनाएर संक्रमनकाल लम्बियो, यती लामो समय देश अनिर्णयको बन्दी भयो । जे होस् दिलै भए पनि एउटा सहमति भएकोछ तर सँगसङै यसको कार्यन्बयन गर्ने कुरामै ठुलो आशंका पनि जन्मिएको छ । नेताहरुको अतितलाई हेर्दा अलिकती पनि विश्वाश गर्न योग्य छैनन् । उनिहरुले त्यो नैतिकता गुमाइसकेका छन । तर के गर्नु!? हाम्रो देशमा पहाड फोरेर मुसा भेटिदा पनि खुशीयाली मनाउनु पर्ने हुन्छ । यिनिहरुले पटक पटक गल्ती गर्दा पनि खुल्ला दिलले काखमा अंगालिदिन्छौं । बडो अचम्म छ । हाम्रो दुर्भाग्य, हाम्रो नियती! जे भन्दा नि हुन्छ ।
अहिलेका समकालिन नेताहरुको तुलनामा क. प्रचण्ड निकै चतुर निस्किए । उनी र उनका समर्थकले यो सत्यलाई मानुन् या नमानुन्, हजारौको बलिदानीबाट निर्मित माओवादी पार्टीको जनमुक्ति सेनालाई निसस्त्रिकरण गरेर बिघटनको दिशातिर उन्मुख गराएकै हुन् । अहिलेसम्मको उनको व्यबहार हेर्दा उनी आफ्नै ईतिहासप्रति पनि इमान्दार देखिएनन् । शान्ति र संबिधान निर्माणका लागि गरिएको सहमति पत्रलाई हतारमा षड्यन्त्र नै त भन्न नमिल्ला तर उनले चलाखी चाँही अबश्य गरेकै हुन् । अहिले नै त क्यान्टोन्मेन्टभित्र बाट असहमती र बिरोधका कुनै आवाज सुनिदैन तर पनि देशले निकास पाउने आशामा मात्र मौन रहेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन जुन बिस्तारै चर्को नहोला भन्न सकिदैन । नेपाली जनताले शान्ति र संबिधान प्रति देखाएको आतुरता, क्यान्टोन्मेन्टमा निस्सासिएका तिनै निराश जनसेना, आफ्नै बर्ग उत्थान गरेका पार्टी नेताहरुको अबसरवादी मानसिकता, अन्य संसदिय पार्टीको चाहना तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने भित्री स्वार्थको प्रतिफल नै यो सहमति बन्न पुगेको हो । ति सबैको गठजोडलाई मिलाएर प्रचण्डले आफुलाई भावी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपती बन्ने आधार तयार गरेका हुन् किन कि यो सहमति सफल भए उनी नायक कहलिने छन् भने असफल भएको खण्डमा चाँही बाबुराम भट्टराई खलनायक बन्नेछन् । क. प्रचण्ड चाँही अरुको नजरमा पानी माथिको ओभानो हुनेछन् । हामीले पछिल्लो सहमतिलाई नियालेर हेर्दा अब बन्ने सम्भावित संबिधान २०४६ सालको भन्दा केही संसोधनसहित अलिकती उन्नत बन्नेछ भने माओवादीको १० बर्षिय जनयुद्धको ईतिहास निमिट्यान्न अवस्थामा पुग्नेछ । यसको अर्थ, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्य उपर प्रचण्ड कमरेडको सैद्धान्तिक घोर बिचलन हो भने समानताको सुनौलो दिन देख्ने सपनामा भुलाइएका कार्यकर्तामाथि गरिएको गम्भिर धोका र गद्धारी हो । हिजो आतंकलाई बिद्रोह र बिद्रोहलाई पनि आतंक भन्न सिकेका कार्यकर्ताले अब आतंक या बिद्रोह के रोज्ने हुन्, त्यसैमा शान्तिप्रकृया र संबिधान निर्माणको भबिश्य जोडिएकोछ । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई मुस्ताङ म्याक्स चदेर एक करोडको पलङमा सधैं सधैंको लागि आराम गर्न पाउनेछन् वा बाटोमै दुर्घटनामा पर्ने हुन्!? यो कुरा स्वयम उनिहरुमा पनि होइन, अब उनिहरु द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ताको निर्णयमै यि सबै चिज निर्भर हुनेछ । त्यसको लागि त अबको केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
मलाई ब्यग्तिगत रुपमा प्रचण्डको चिन्ता छैन न त किरण, बाबुराम र बादलको नै । यो सहमति एउटा नागरिकको लागि अत्यन्तै सकारात्मक छ, सफलतापुर्बक कार्यन्बयन हुनसकेको बखत यसको महत्व अझै बदेर जानेछ । यसका हस्ताक्षरकर्ताहरुको भबिश्य पनि उज्ज्वल रहनेछ तर शान्तिप्रकृया भनेर सहमति गरिएको मुख्य अंग माओवादीका जनसेनाहरु यो खबरले उत्साहित हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । कारण स्पष्ट छ, उनिहरुलाई युद्धको बेला राष्ट्रिय सेना बन्ने, अझ सेनापती, जर्णेल-कर्णेलको सपना देखाइएको थियो तर त्यो भएन । उनिहरुले बर्गीय असमानतालाई आधार मानेर सदैव मर्न र मार्न तयार रहे । आज उनिहरुको आत्मसम्मान जोगिने गरी सहमति हुनुपर्ने थियो, त्यो भयो वा भएन, उनिहरुको सपनाको सम्बोधन कती भयो भन्ने त उनिहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । अहिले जनसेनाले शिविरको पट्यारलाग्दो जीवनबाट उन्मुक्ती पाउनु मात्र पूर्ण समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उनिहरुको मौन समर्थनको अर्थ सहमतिको स्वागत होइन बरु शान्ती प्रकृया टुङियोस् र देशले संबिधान पावस् भन्ने कामना नै हो । उनिहरुले अनुशासितपुर्बक पालना गरेको यो सैन्य 'चेन अफ कमान्ड'लाई ठुलो त्याग नै मान्नु पर्ने हुन्छ । उनिहरु खुशी हुने गरी अर्थात सम्मानजनक तरिकाले समायोजन र सजिलो हुने गरी पुनर्स्थापना गरिनुमै देश, पार्टी, नेता र जनता सबैको लागि उचित हुनेछ ।
अर्को समस्या भनेको संबिधान निर्माणमा देखिएको अबरुद्ध प्रकृया हो । त्यसको गाँठो फुकाउने उपाय भनेको सकेसम्म सबै दलहरुको विश्वाश लिनु हो, नभए मुख्य दलहरु बिचमा सहमति गर्नु नै हो । यो यथार्थलाई अधिकांस दल र नेताहरुले बुझेकै छन् तर इमान्दारीपुर्बक पहल गरेको देखिदैन । हाम्रो सम्भिधान सभाको बैठकमा केवल २ जना सभासदले पनि संसदको महत्वपूर्ण बैठकहरु रोक्न सक्ने हैसियत राख्न सक्छ भने किरण-बादल पक्ष फुटेर या नफुटेर नै गर्ने बिरोधको सिधा असर अबश्य पनि शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणमा पार्नेछ । त्यतिखेर अहिलेको सहमतिको औचित्य त्यती अर्थपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तसर्थ, अहिले परिस्थिती कावुभित्र रहदै नियन्त्रण गर्नतिर सोच्नु नै बदी उपयुक्त हुनेछ, न कि धेरै दिला भैसकेपछि वा चिज बिग्रिसकेपछी । एउटा सच्चा नागरिकको रुपमा म के चाहन्छु भने शान्तिको नाममा मुर्दा शान्ति र संबिधानको नाम अस्पष्ट संबिधान लेखिनु र नलेखिनुमा त्यती तात्विक फरक देख्दिनँ । अहिलेको आवश्यकता भनेको त दिर्घकालिन शान्ति, सबल संबिधान र सम्रिद्ध नेपालको परिकल्पना नै हो । तर हामी समयको बर्बादी गरिरहेका छौं, त्यो बाटोमा हिंड्न डराई रहेका छौं । शायद अझै पनि अल्मलिरहेका छौं ।
मैले यो सहमति कसरी सम्भव हुनसक्यो भन्ने त माथि नै उल्लेख गरिसकेकोछु । जनसेनाहरु क्यान्टोन्मेन्टभित्र उकुसमुकुस भएर थुनिएर बस्नुभन्दा चित्त नबुझे पनि यो सम्झौतालाई स्वागत गर्नुको अर्को बिकल्प पनि थिएन र गरे पनि । अन्यथा, संसार बदल्न गुरिल्ला बनेकाहरु बनपाले र चौकिदार बन्नकै लागि मौन समर्थन जनाउनु आश्चर्यलाग्दो छ, त्यो पनि समायोजन भएर होइन नयाँ भर्ती प्रकृया अपनाएर । मैले युद्ध नलडेको हुँला तर युद्ध देखेकोछु, युद्ध भोगेकोछु । आज क्षणिक शान्ति-शान्ति भनेर कराउनेकै कारणले भोली अर्को गृहयुद्धको आधार नबनोस् किन कि हतियार चलाऊन अब ति कसैले सिकिरहनु पर्दैन । भोली शान्तिप्रकृया चालु रहदा पनि अपेक्षित वा सन्तोषजनक हुन नसकेको खण्डमा किरण-बादलको पक्षमा लडाकुहरु उभिने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ । यदी त्यो स्थिती भैदिएमा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ किन कि प्रचण्ड र बाबुरामले नै पार्टीभित्र पेलेर जाने निती अख्तियार गरिरहेका छन् । र माथिल्लो स्तरका कमान्डरलाई आफु अनुकुल पार्न राजनैतिक नियुक्तिको आश्वासन बाँडिएको छ र थामथुम पारिएको छ भन्ने सुन्नमा आएकोछ । स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा प्रचण्ड आफ्नो सिद्धान्तबाट बिचलित भएकै हुन्, क्रान्तिलाई धोका दिएकै हुन् र इमान्दार कार्यकर्ताप्रति गद्धारी गरेकै हुन् । भलै, अहिले प्रचण्डलाई नेपालकै बुद्धिमान नेता मान्ने उनका समर्थकले यो कुरा स्विकार्न त के सुन्नसम्म पनि चाहने छैनन् । अरुले जे सुकै भने पनि प्रचण्ड एक सक्षम ड्राइभर अबश्य हुन् जसले चाहेको खण्डमा बाटो अनुकुल होइन आफु अनुकुल स्टेरिङ् मोड्न सक्छन्, गाडी अनुकुल होइन आफु अनुकुल गियर बदल्न सक्छन् । यो क्षमता उनिसँग छ भन्ने कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई ऊहिल्यैदेखि पेलिदै आएकै हुन् । उनी शान्ति र संबिधानको एजेण्डामा निरन्तर अडिग रहेकै हुन् । अन्य प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भन्दा उनको कालमा सुशासनको केही आशा पलाएकै हो । उनले आफ्नो स्वच्छ छवी कायम राखेर देशलाई शान्ति र संबिधान दिने दिशामा अग्रसर छन् । उनको तत्परतालाई हेर्दा शान्ति प्रकृया टुङिने र संबिधान पनि लेखिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । तर केवल औपचारिकता पुरा गर्ने खालको शान्तिप्रकृयाको अन्त्य र संबिधान घोषणाले जनताको आकांक्षा कदापी पुरा हुँदैन । कुनै पनि प्रकृयागत कुरामा पार्टीभित्र आबश्यक छलफल बिना प्रचण्डको साथ शयर हुँदै एकलब्य बन्नुको मज्जा लिनु भबिश्यका लागि त्यती फाईदाजनक छैन । बिप्पा सम्झौतामा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटा अबश्य छन् तर भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि अरु राजनैतिक दलहरुसँग यथेष्ट छलफल नगर्नु पनि अनौठो नै छ । किरण-बादलसँगको गठबन्धनकै जगमा टेकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा आसिन हुन पाएका उनले त्यही पक्षलाई प्रहार गर्न प्रचण्डलाई यती सजिलै आफ्नो काँध थापिदिनुले पनि उनको नियतमाथि शंका जन्माएकोछ । उनले किरण-बादल पक्षलाई समेत समेटेर अगाडि बद्न खोजेको भए पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको उचाइ अझ बद्ने थियो र थुप्रै कार्कर्ताको मन र विश्वाश जित्ने सम्भावना प्रचुर थियो । तर उनले त्यो आवश्यकतालाई पुरै नकारेर सिर्फ प्रचण्डको लौरो बन्न सकेकोमा नै आफ्नो सफलता सोचिरहेका छन्, जुन प्रत्युत्बाधक हुनसक्नेछ ।
ने.क.पा. माओवादी अहिलेको यो स्थितिसम्म आउँदा प्रचण्ड र बाबुरामको जती योगदान छ, त्यत्ती नै योगदान किरण र बादलको पनि छ । शान्तिप्रकृयाका केही महत्वपूर्ण छलफल र निर्णयहरुमा उनिहरुलाई संलग्न र सन्तुष्ट पार्न नसक्नु संस्थापन पक्षको कमजोरी हो । तर उनिहरुले नेत्रित्वको केही कार्यशैलीसँग असहमत हुँदैमा सम्पूर्ण शान्ति र संबिधान निर्माण प्रकृयामै खोट देख्नु तथा सिङो प्रकृया नै अबरुद्ध पार्न खोज्नु ठुलो भुल हो । १८औ शताब्दीको कार्ल मार्क्स र १९औ शताब्दीको माओ जे डोङको बिचार चाहेरै पनि नेपालमा ठ्याक्कै लागु नहुनसक्छ । उनिहरुले समयको बास्तविकतालाई बुझेर सिर्जनात्मक कोणबाट अझ कलात्मक दंगले नेपाल र नेपालीलाई प्रगतिशील बाटोमा डोर्याउन छाडेर कम्युनिष्टको घोषणा पत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरुबाट हलचल हुन नमान्नु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । जो कसैले पनि स्वतन्त्रतालाई अराजकता र आतंकलाई बिद्रोहको आवरण दिन नसक्ने होइन तर त्यती ठुलो त्याग गरेर पाएको उपलब्धीलाई गुमाएर फेरी शुन्यमा झर्न खोज्नु हातको चरालाई उदाएर झ्याङका चराको पछाडि कुद्नु सरह हो । आन्तरिक एकता मजबुत नहुन्जेल राष्ट्रिय सफलता असम्भवप्राय छ तसर्थ सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेमा मात्र बुद्धिमानी हुनेछ । कामना छ, देश बिकासमा कोही नछुटुन्, कोही नतुटुन् ।
अहिले दलहरु जसरी घिस्रिदै र पछरिदै यो बिन्दुमा आएर जुन सहमति गरेका छन्, यसैको जगमा टेकेर सबैलाई मान्य हुने गरी शान्ती प्रकृया टुङियोस् र संबिधान लेखिएर चाडै घोषणा भएको दिन देख्न पाइयोस् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशा पनि त्यही नै हो । नेपालमा सहमति अनिबार्य छ तर सहमति नै अभिशाप बनिरहेछ । शायद सतिले सरापेको देश भनेको यही नै होला !
Posted by Chandra Magar at 8:42:00 PM No comments:
पैशाको भाउमा कसरी बेचूँ, बुवाको चिंहान
बुवाको स्वर्गे भएकै राती, अर्को बिहान
नखाई-नलाई सन्तानलाई, जोडेको सम्पत्ति
बुवाको आत्मा आमाको मन, रुनेछन् छट्पटि ।
मरेर गए अलप भए, भन्दा हुन् मान्छेले
अद्रिश्य भैइ इश्वर बने, सोच्दैछौं हामीले
थकान-निन्द्रा नभनेर, कमा'को खेतवारी
पूण्य थाप्न जननी सराप, स्विकारु कसरी ।
अर्काको देशमा रगतसँग, साटेका पैसाले
अर्काको खेतमा पसिनासँग, खर्चेका बैंशले
दु:ख-कष्ट हाड-मासुको, लालपुर्जा साक्षी छ
नामसारी होईन बा-आमाको, पौरख माथि छ ।
बुवाको चिनो आमाको नासो, त्यही त बाँकी छ
दाजुको मानो दिदीको माइत, त्यही त आशा छ
घरको शोभा रित्याइ बन्ने, समाजको दानी म
कुलको इमान भत्काई हुने, कस्तो ज्ञानी म ?
चोखो माया गरेकै हुन्छु, ए! मेरो जंकोट
आफ्नै पनि सपना थिए, मलाई भो संकट
सुहा'को हुन्छ चन्द्रको दाग, त्यै सुन्दर बन्छु है
कर्तव्य मैले भुल्नेमा छैन, झन प्यारो हुन्छु है ।
Posted by Chandra Magar at 9:15:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 9:05:00 PM No comments:
- हामीले 'अ'बाट अनुशासन कहिले सिक्ने होला !? 01 Sep 011
- राजनैतिक ब्यक्तिले राजनैतिक ब्यक्तिसँग नै गरेको अनेक टिकडम अस्वभाविक नहोला तर राजनैतिक ब्यक्तिले अराजनैतीक मान्छेसँग गरेको अन्तर्घात कदापी सह्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै दिन अबश्य महँगो साबित हुनेछ । 02 Sep 011
- हिजोअस्ती बुद्धसँग खेलिरहने म मान्छे, अचेल पिस्तोलसँग पो रमाउन थालेकोछु । 03 Sep 011
- म त जोइटिङ्रे र पोइटिङ्रेले बिगारेको मुलुकमा पो जन्मिएको रहेछु । 04 Sep 011
- आशा थियो तुत्यो । विश्वाश थियो त्यो पनि तुत्यो । 05 Sep 011
- भिरालोमा गाह्रो हुन्छ पशुलाई घास चर्न
कत्रो बिपत बतुवालाई खहरे खोला तर्न
झन साह्रो पंछीलाई बचेँराको चारो खोज्न
सजिलो त कहाँ छ र मान्छेलाई जीवन भोग्न ।
06 Sep 011
- I don’t want beasilly man and that’s my silliness! 09 Sep 011
- Intelligent is not always Superior but the Winner is! 11 Sep 011
- I need to buyabullet andagun, I need to shot at my enemies so called friends, I need to shot down some criminals so called politicians. 13 Sep 011
- Traitors are traitors! Some people are better to die than to live! 14 Sep 011
- Where is ME? 15 Sep 011
- कुनै पनि खराब ब्यक्तिले सहि सिस्टमलाई बिगार्दछ भने खराब सिस्टमले सहि मान्छेलाई पनि बिगार्दछ । मैले देखे/भोगेको यथार्थ यही नै हो । 16 Sep 011
- भो, अब रुदिनँ म । 18 Sep 011
- A life is not only to born and die but there must beapurpose to live! 20 Sep 011
- जिउ कुप्रो भए पनि उच्च हुन्छ मन । 22 Sep 011
- निर्णय: कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा जो कसैलाई पनि अबश्य गाह्रो हुन्छ । अझ दुरगामी असर पार्ने निर्णय लिनु त निकै कथिन हुन्छ । मेरो बुझाईमा कुनै निर्णय लिनुको अर्थ केहीलाई त्याग्नु र केहीलाई छोप्नु नै हो । हरेक ब्यक्तिका भित्री चाहनाहरु अनगिन्ती हुन्छन जुन सबै पुरा हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् । जो कसैको पनि सपनाहरु अनेक हुन्छन जुन सधैं साकार हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् । यसर्थ अनगिन्ती रोजाई र अनेक सपनाहरुलाई छानेर कतिपयलाई फ्याक्नु पर्ने हुन्छ त कतिपयलाई जबर्जस्ती भुल्नु पर्ने हुन्छ । सबैलाई अङालिरहदा कसैलाई नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ जो निकै प्रिय हुन्छन । हरेक ब्यक्ति परिस्थिती अनुसार कोमोल र कठोर बन्नै पर्ने रहेछ अन्यथा कुनै दिन आफ्नो सबैलाई गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सम्भावना रहिरहन्छ, जुन निकै पिडादायी हुने गर्दछ । 25 Sep 011
- बोस्टन मगर समाजलाई धन्यवाद एवम एस.एल.सी. मा उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल बनेका भाइ रोशन र बहिनी मेलिनालाई हार्दिक बधाई छ । उनिहरुलाई प्रोत्साहन त अबश्य प्राप्त हुने नै छ साथै आउने दिनमा अझ उच्च प्रगतीका लागि थप उत्साह थपिदिने छ । हाम्रा भाइबहिनीले यो पुरुस्कारको महत्व र अर्थ आज नभए पनि भोली राम्ररी बुझ्नेछन् भन्ने विश्वाश मैले लिएको छु ।
बोस्टन मगर समाजको यस कदमले देश छाडेर प्रदेश पुगेपछी उतै रमाउने, उतै हराउने र आफ्नो जन्मभुमिलाई माया मारेर सभ्य भनिने मुलुकमा असभ्य मानसिकता बोकेर बाँचिरहेका हामी नेपालीहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ । हामी ब्यक्तिगत रुपमा सम्पन्न हुन खोज्छौ, केही सम्पन्न पनि हुन्छौ तर आफ्नो जाती, समाज र मातृभूमी प्रतिको दायित्वलाई चटक्कै भुलिदिन्छौ । हाम्रो यस्तो गैरजिम्मेवार प्रब्रितिको ठीक बिपरित बोस्टन मगर समाजले आफ्नो जाती, समाज र मुलुक प्रतिको गहिरो माया र जिम्मेवारीपनले सबैलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्ने हो ।
झुपडीको बास, बिपन्न जीवन, अशिक्षा र पछौटेपन हाम्रो यथार्थ हुँदा हुँदै पनि स्वप्न महल र आधुनिकताको संकिर्णतामा भुलेर बकम्फुसे गफ हाक्ने हामी मगर दाजुभाइ-दिदिबहिनी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई झक्झक्याउने प्रयत्न साह्रै सराहनिय छ । बोस्टन मगर समाजको अतुलनिय र प्रेरणादायी कामका लागि धन्यवाद साथै पुरुस्कार पाउने भाइ बहिनीलाई पनि भबिश्यका लागि शुभकामना । (बोस्टन मगर समाजले एस.एल.सी. मा उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल मगर बिद्यार्थीहरुलाई गरेको सम्मानका सन्दर्भमा)
Posted by Chandra Magar at 9:30:00 PM No comments:
मेरो हातको घडी
मन परे फनफनी घुमिराख्छ
मन नपरे मज्जाले सुस्ताउछ
यो अली बिशेष खालको छ
मेरो देशको घण्टाघर जस्तै ।
कहिले घडी सुत्छ, म उठ्छु
कहिले म सुत्छु, घडी चलिरहेको हुन्छ
मेरो घडी स्थिर हुन्छ, म चलायमान हुन्छु
घडी चलाख हुन्छ, फेरी म अल्छि हुन्छु ।
यसै गरी बेतालमा कुदिरहेका हुन्छौ ।
देश सुतेको बेला जनता जागेको जस्तो
जनता जागेको बेला देश सुतेको जस्तो
ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो छ
म सकृय रहन खोज्दा
मेरो घडी निदाइदिन्छ
म निस्कृय भैदिदा
घडी एकतामसले दौडिरहेको हुन्छ ।
अचेल बिना कारण
समय र मेरो बीचमा फाटो आइरहेकोछ
म ब्यूउझिदा घडी चीर निन्द्रामा हुन्छ
म निदाउदा घडी खुर्रर कुद्छ
दुनियाँले मलाई गल्ती देख्छन
मेरो आक्रोस बदेर आउछ
घडीको सुई निस्फिक्री बिश्राममा हुन्छ
म माफ गरिदिन्छु
किन कि सम्झौता अनिबार्य छ
कहिले मलाई धोका दिन्छ
कहिले मैले धोका दिन्छु
यहाँको परम्परा यस्तै छ
न घडीले देश चलायो
न देशले समय चलायो
न मैले देश र समय नै चलाऊछु ।
तोल, देश र विश्वभरी
इमान-जमान खत्तम भएको बेला
समयसँग के गुनासो गर्नु!
आँफैसँग के चित्त दुखाउनु!
हिंडेर, कुदेर र सुतेर पनि
घडीले बजाएकै छ
म सुतेकैछु, जागेकैछु
जाबो तालमेल न नमिलेको हो
घडी र मेरो घनिष्ठता तोडिदा
युगको सराप लाग्नेछ, शायद
किन कि यहाँ अनिश्चित छ
शान्तीको र संबिधानको भाखा होस कि
बिकास र स्वतन्त्रताको साइत
घडीको चाल र मेरो ताल
निरन्तर यही हुनेछ
यसरी नै सधैं कायम रहनेछ
म घडीको दोष भन्छु
घडीले मलाई दोषी भनोस
बरु म घरिघरी
मेरो घडीको सुई घुमाउन तयार छु
मेरो समय तालिका बदल्न तयार छु ।
Posted by Chandra Magar at 8:53:00 PM 1 comment:
म प्रेमी हुँ ।
मनभित्र माया टुसायो
कोपिला हुँदै फुल्यो पनि
सिउरिनलाई चुल्थो खोजें
तिम्रै सौन्दर्य जाती लाग्यो
ठुलै आँट गरी हुर्काइ दिएँ
तिमीलाई देखाउन भनि
चियाउदै बाटोमुनी बसिरहें
तिमीलाई बोलाउन भनेर नै
बारीको साध नाघी दिएँ
आफ्नै मन्जुरिमा कबोल गरी
मनको सिमारेखा नाघिदिएँ ।
आशा गर्दा गर्दै
हातको फूल ओइलाइ जादा पनि
लागिराछ तिम्रै विश्वाश प्यारो
नसुनेको तिम्रै आवाज कर्णप्रिय
देख्नै नपाएको सौन्दर्य अती सुन्दर
बारम्बार कोशीस गर्दा पनि
नाघ्नै सकिनँ मैले
तिम्रो भावनाको सिमारेखा ।
तिमी मेरी भएनौ
तिम्रो सिउदो भर्ने पनि म भईनँ
तर पनि आजसम्म
नाघ्नै सकिनँ, प्रियतम!
बचन र कसमको तिम्रो रेखा
तिम्रो आँशु र मुटुले कोरिएको रेखा
तिम्रो साईनोको त्यो लक्ष्मणरेखा ।
म आदर्श प्रेमी हुँ ।
रेखा कोरिरह्यौ ।
Posted by Chandra Magar at 7:27:00 PM 1 comment:
सुनको पोते चाह्यौ तिमीले, फूलको माला मैले ।
धनको स्वर्ग माग्यौ तिमीले, मनको स्वर्ग मैले ।
भेटघाट भाग्य भन्थे, मलाई खेल भयो
चोखो माया गर्नु पनि, कस्तो छल भयो
सुनको मोह गर्यौ तिमीले, जूनको मोह मैले
देवी देउता पुज्यौ तिमीले, पिरतिलाई मैले ।
रुन गाह्रो भन्छन यहाँ, मलाई शिरानी भो
त्याग गर्न साह्रो भन्छन, पिडा बिसौनी भो
धनको मोल जित्यौ तिमीले, जूनको मुस्कान मैले
मान्छेहरु पुज्यौ तिमीले, एउटा ह्रिदय मैले ।
Posted by Chandra Magar at 10:18:00 PM No comments:
तिमी र झुल्के घाम
तिमीलाई थाहै छ
मलाई बिहानी मन पर्छ
मलाई उस्तै-उस्तै लाग्छ
तिमी र झुल्के घाम ।
बिहानीको झुल्के घाम
शिरुको यौवनसँग लहसिदा
शितको थोपा लजाएको पल
मलाई औधी मन पर्छ
मलाई उस्तै प्यारो लाग्छ
त्यो परिवर्तनशील समय ।
मेरो एक अब्यक्त रहर
तिम्रो सुहागको द्रिश्यबलोकन गरी
सर्माएर शिर निहुरिदा पनि
हर्षित उत्तेजनाले उफ्रिने मन
त्यो आशा र भबिश्य भेट्न
छिप्पिएको धैर्यता आतुर छ ।
म जंकोटको पिडाले बिक्षिप्त छु
मलाई झनै प्यारो छ
जन्मभूमी र मातृभूमी ।
मेरो एउटै चाहना छ
टुकीहरु बल्नुपर्छ-थोत्रा झुपडीहरुमा
बच्चाहरु रुनुपर्छ-सुनसान घरहरुमा
हलिहरु नारिनुपर्छ-बाँझो खेतहरुमा
भालेहरु बास्नुपर्छ-रातको बिदाईमा
गर्भबाट स्वप्न भ्रुण होइन
हुर्केकै शिशु आत्मा जन्मिनुपर्छ
तिमीलाई प्रसव ब्यथाको सन्जीवनी
म निर्धक्क पिलाइदिनेछु ।
Posted by Chandra Magar at 10:16:00 PM No comments:
अब त हदै भएन र!?
झुतको खेती नि पाकिसक्यो
झुठा आश्वासन नि पुगिसक्यो
मिठा कुरा'नि अब तिता भए
गुलिया नारा'नि अमिला भए
जनसेवक र राष्ट्रसेवक भनिनेले नै
जनता र राष्ट्रसँग
यो कस्तो बिचित्रको खेल खेल्यौ?
तिम्रो गरम भाषणले साह्रै गर्‍यो
चर्को नाराले भतभती पोल्यो
अब त हदै भएन र भन्या!
अब अलिकती नैतीकता छ भने
इमान्दारीपूर्बक जिम्मेवारीबोध गरेर
नरम भाषण र शान्त आसनबाट
प्रगतिको खेती मात्र गरे हुन्थ्यो
चर्कै चर्को बिकास गरे हुन्थ्यो
उकुसमुकुस यो बातावरणमा
शितल बायु छरे हुन्थ्यो
अब त साँच्ची हदै भयो ।
Posted by Chandra Magar at 10:14:00 PM No comments:
इस्पाट झै देखिए नि
खोक्रो छु म भित्र भित्रै
सम्हालिएर हिंडें पनि
छरपस्त छु यत्र तत्रै ।
हृदयमा साँचे मैले
काँडा बिझाइ दियो
नचाहेरै आज फेरी
आँखा रुझाइ दियो ।
ताल झै चोखो शान्त प्रित
चट्याङ् बन्नु रहेछ
सुघन्धित त्यो हाम्रो नाता
लठ्याइ जानु रहेछ ।
संसार नै 'जितें' सोच्थें
उनको सामु हुँदा पहिले
उनकै सामु पर्दा अहिले ।
उज्यालोको शरण पर्छु
अन्धकार भो उज्यालो नै
बियोगी म जिउदै मर्छु ।
तस्बिर साँच्ने यि आँखाहरु
प्रिय छन ब्यथा पोखे पनि
खोजिरहन्छन आशै आशमा
आउछिन कि अझै भनी ।
आगोले के पोल्दो हो र !
दु:ख भोग्न के गाह्रो र !
बाटो बिचमै अल्मलिदा ।
खै कुन्नी कती होलान
उनकै लागि जिउनेहरु
उस्तै होलान मैले जस्तै
ब्यर्थ आसुँ पिउनेहरु ।
Posted by Chandra Magar at 6:09:00 PM2comments:
- Few cries n few laughs makealittle big man, ME!
-"All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother.” ~ Abraham Lincoln
-"God could not be everywhere and therefore he made mothers." ~ Jewish Proverb
- Either I will change or ll be changed!
(जब म मातृभूमी फर्केको थिएँ, नेपाल बदल्ने ठुलो अठोट लिएर आएको थिएँ तर अचेल नेपाल मलाई बदल्ने दुस्साहस गर्दैंछ । म नेपाल बदलिनुपर्छ भन्छु, नेपाल मलाई पो बदल्न खोज्दैछ । हामीले अहिलेसम्मको ईतिहासलाई हेर्दा राजनीति फोहोरी खेल होइन भन्ने आधार पनि पाउन सकेका छैनौ । आजभोलि जताततै राजनैतिक हस्तक्षेपले हरेक क्षेत्रलाई झनै घीनलाग्दो बनाइ दिएको छ । यस स्थितिमा केही बाँकी रहेका आशा र विश्वाश पनि तुट्नुका साथै थप बित्रिष्ना उत्पन्न भैदिन्छ । मेरो कुनै खाश निती नभए पनि नैतिकता छ र यसैमा म अडिग छु र रहनेछु ।)
- ए मान्छे!
तिमी बिश्वास गर न
"गधालाई धोएर कहिल्यै गाई हुँदैन ।"
(मैले मान्छेको व्याबहारिक पक्ष बोल्न खोज्दैछु, यहाँ राजनैतिक पूर्बाग्रही र प्रतिशोधको भावना पोखिन्छ । लेख्नुस्, मान्छेको गुण र स्वभाव आफ्नै अनुभवमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत र मुरी मुरी धन्यवाद छ तर गलत ठाउँमा यि कुरा अशोभनीय हुन्छन चाहे जतिसुकै सहि नै किन नभैदिउन । नेपाल अगाडि नबद्नुमा हाम्रा यस्तै कमजोरी र पछौटेपनले गर्दा पनि हो । मुख्य समस्या अरुमा भन्दा पनि हामी आँफैभित्र छ । देशको दुर्गति हुनुमा नेतालाई मात्र दोष दिएर हामी जनता चाँही चोखो हुनैसक्दैनौ । आखिर जनताले नेता बनाउने न हो । नेता त जनताले गरेका निर्णयको उपज मात्र हुन । तेङ्बे जी, यदी मौका मिलेछ भने यो तपाईंको प्रश्न अर्थात जिज्ञासा माओवादी पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ता वा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई नै राख्नुस्, शायद उचित जवाफ पाउनुहुनेछ । अन्यथा, मैले जस्तै हेर्दै जानुस् आँफै देख्नु हुनेछ । नेपालको कुन नेता र कुन मन्त्री तथा कुन घटना पो उदाङिन बाँकी छ र !? भोली नभए पर्सीसम्म त देखी नै हालिन्छ नि । हिजो अस्ती पनि देखिएकै हो क्या रे!)
- Buddha was born in Nepal!
He was our natinal hero n will always be !
17 May 2011 (२२ महिनासम्म सडकमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको चर्को नारा लगाउने माओवादी पार्टीले त्यस अबधिभर कम्तिमा पनि एक पटकसम्म न बुद्धको नाम उच्चारण गर्‍यो, न त बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी बारे भारतले बिश्वसामु छरिरहेको भ्रमको बिरोध नै गर्‍यो । शायद देशका हजार ठाउँमा सभाहरु आयोजना गरेर भाषनमा गर्जियो होला तर राष्ट्रिय मुद्धा उठाउने भन्दा बदी त प्रतिशोध मात्र पोखिरह्यो, सिर्फ गाली मात्र गरिरह्यो । दुष्ट छिमेकीले गरिरहेको षड्यन्त्र र ईतिहास बङ्याउने दुस्साहस बारे मुख खोल्ने आबश्यक कहिल्यै ठानेन ।)
- हरेक मौसममा थुटुनो मिठ्याउदै र हातको कुहिनोसम्म रस चुहाउदै सत्ताको फल चुस्न पल्केको कांग्रेसले राष्ट्रिय एजेन्डा लिएर बहसमा उत्रिनुको सट्टा हिनताबेगमा मुर्मुरिदै भूई चिथोर्नुको केही अर्थ रहनेछैन । यि महाजनहरुका गुलिया भाषण अर्को नौटंकी बाहेक केही हुँदै होइन । हामी जनताका लागि शान्ती र संबिधान समस्या होइन, समाधान हो । सरकार सर्त होइन, अनिबार्य आवश्यकता हो ।
- बोल्ने देवता!
- It may be hard but be always ready to speak your mind!
24 May 28, 2011
- "With every step that you take with courage, you receiveathousand fold help from God."-Unknown
26 May 28, 2011
- Know your Dream, know your illusion
Know your destiny, see your vision!
- संबिधानसभा न बिगठन हुनेछ, न त निस्कृय नै । देशलाई खरानी र जनतालाई मलामी बनाउने दिवास्वप्न नदेखेकै जाती हुनेछ । एउटा भएको बैधानिक निकायलाई भङ गरेर थप अस्थिरता निम्त्याउन चाहने देशद्रोहीका बिरुद्ध मुकाविला गर्दै उचित फैसला गर्ने समय हो यो ।
Posted by Chandra Magar at 5:47:00 PM No comments:
गीत - कहिले उनीलाई
कहिले उनीलाई भेट्न नपाई, पल-पल तड्पिरहेँ ।
कहिले उनीले देख्लान् भनी, क्षण-क्षण झस्किरहेँ ।
माया भन्नु यस्तै रहेछ, अतितलाई साँच्नु पर्ने
जित्दा जित्दै हार्दा पनि, जिन्दगी यो बाँच्नु पर्ने
बिर्सिसकेँ भन्छु तर भित्र भित्रै सम्झिरहेँ
सम्हालिन खोज्छु तर आँखाहरु रुझिरहे ।
बाचा-बन्धन भन्नु रहेछ, एकैटर्फी/एकलौटी तोड्न मिल्ने
लेखिएको साईनो पनि, भाग्यबाट मेट्न मिल्ने
अजम्वरी प्रेम थियो, दुई दिनलाई थियौं हामी
जुनी-जुनी सङै भन्थ्यौं, आफै दियौं दागबत्ती ।
पहिले उनीलाई भेट्न नपाई, पल-पल तड्पिरहेँ ।
अहिले उनीले देख्लान् भनी, क्षण-क्षण झस्किरहेँ ।
Posted by Chandra Magar at 5:41:00 PM No comments:
- Lets buildaharmonious, peaceful n prosperous world!
Happy New Year 2011AD.
- आजसँगको सहवासले भोलीको लागि मेरो प्यारो भबिश्य जन्माउने आशा लिएर धैर्यताका साथ मन्दपमा बसिरहेकोछु ।
(हरेक सहवासका कारण गर्भ रहने कुरा आउँदैन । तर रहिसकेको गर्भ तुहिन सक्ने सम्भावना मात्र होइन तुहाइने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । म चाँही 'miscarriage' भन्दा पनि 'abortion' को बिपक्षमा छु ।
हाम्रो भबिश्य अबश्य पनि हाम्रै हातमा हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रै काधमा हुन्छ ।)
- Walking forward..
- सक्छौ भने जितेर गर, सक्दैनौ भने मिलेर गर, त्यो पनि सकेनौ भने पेलेर गर तर गर्न चाँही गर ।
(- जितेर- पेलेर यो तरिकाले केहि पनि नगर । आफ्नो र जगतको भलो हुनेगरी गर । Thapa Meena
- कि बिद्द्वानले गर्नु पर्यो हैन भने बुद्धुसँग हार्नु पर्यो । यदी बिद्द्वानले बुद्धुसँग हार स्विकार्ने भए स्पष्ट हुनुपर्यो कि बिद्द्वान भनिने स्वयम मुर्ख हो । तसर्थ उसले बाटो खोल्नुपर्छ ।
हामी सबै मनुवा भएकैले सबैसित समान व्यबहार हुनसक्दैन । स्वतन्त्रतालाई अराजकतासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन । यदी जगतको भलो हुन्छ भने पेलेरै पनि अघी बद्नुपर्छ । तर त्यो भन्दा अगाडि दुई कुरा बाँकी छन, १. जितेर र २. मिलेर ।
अनी दुई कुरा अझ बदी महत्वपूर्ण छन, 'Diagnosis and Treatment' अर्थात समस्याको पहिचान र समाधान ।
-"स्तर र क्षमतामा(ले) बराबरि समान छैनन र हुँदैन पनि तर मानविय मेलमिलाप्,स्नेह र सम्मान हुनु पर्छ,गरिनु पर्छ ।" Thapa Meena
- मेरो एउटै स्वार्थ भनेको पनि यत्ती नै हो, सबैको आँखामा सबै समान हुनु पर्यो, सम्मनित हुनुपर्यो । यदी मैले कल्पना गरेको समाज यस्तो हुन्थ्यो त अरुलाई जित्ने, मिल्ने र पेल्ने कुरा नै हुन्थेन । जसले अत्याचारको बिरुद्ध गर्छ उसैलाई अत्याचारी भनेर बुझ्न खोज्नु गलत छ । तै पनि यहाँको बिचारहरु पढिरहदा लाग्छ, भावनात्मक रुप मात्र फरक हो, सार चाँही उही । मलाई लाग्छ, यि कृया र प्रकृयाको संशलेषन एउटै हुन । शायद सहिश्नुताको ‘रेन्ज’ मात्र फरक होलान । अन्यथा मानविय उद्धेश्य एकै देखिरहेकोछु ।)
- नेपाली नारीहरु साह्रै सहनशील र संघर्शशील छन ।
(म आँफैले अनुभव गरेको कुरा शेयर गरेको हुँ । सबै कुरा समयको आवश्यकता अनुरुप परिवर्तन हुदै गैरहेका छन । मुख्य कुरा, हरेकले आफुलाई सुधार्दै र परिस्कार गर्दै लानु हो ।)
- मैले कहिल्यै हार्नु परेको छैन, सपनामा होस् या बिपनामा । म कति भाग्यमानी!
Yes, I am happy for what I am, but I want to be some more!
- Observe the life through lovely eyes of your future.. Cry for those who smile for you.. Smile for those who cry for you. Walk on the path of ‘High living, High thinking’ if not ‘High thinking, simple living’ but not that ‘high living, simple thinking’. Do all this from your heart. When you don’t find solutions in your way, I will be always there for you. I will give you the solution, that is only YOU.
Belated Happy Birthday saraswati!
- मेरो अधिकारको कुरा हो । यो हेक्का रहोस्, स्वतन्त्रा माग्दै धुवाको मुस्लो उडाउने ति अराजकहरुको भिडमा मिसिन मलाई बाध्य नपारियोस् ।
- कतिपय ध्रुव सत्य लाग्ने कुराहरु भ्रम र कतिपय भ्रम लाग्ने कुराहरु सत्य पनि हुँदा रैछन् । शायद आदर्शको तुषारापत हुनुको सम्बन्ध यहिनिर पो हुन्छ कि!?
- Happy Maghi sankranti!
-मौन बिद्रोह: मैले कहिले काही त मौन बिद्रोहको लगभग अन्तिम क्षणतिर पुगेको आभास गर्छु तर त्यो अवस्था भने पार गर्न सकेको छैन । म अझै समिक्षा गर्दैछु, चिन्ने प्रयत्न गर्दैछु अर्थात अझै अनुसुन्धानमै छु । अहिले म आँफैभित्र र अरुहरुमा खोतलिरहेको छु, भएका र हुनेवाला बिद्रोहको रुप र स्वरुपहरु । म यसको सुरुवात, बिकास र अन्तिम गन्तब्य खोजिरहेकोछु । सफल भएछु भने कुनै दिन स्पस्ट पार्ने नै छु ।
- पुष्पकमल दाहाल, मोहन बैढ्य र बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टीको हाड, मन्स र छालामा लुछाचुडि गर्दै प्रचण्ड, किरण र लालध्वजको चिता जलाउने तयारी गर्दैछन । तर वास्तबिकतामा नेपाल र नेपालीको भबिश्यलाई नै चिहान बनाउने खतरा बदिरहेछ ।
- आशुको धनी म भन्दा अरु कोही छ कि संसारमा
जन्मेकै रिन नपाई तिर्न बाच्या'छ भारमा ।
(कहिले काही एक प्रकारको नमिठो पिडा हुन्छ र गुनासो गर्न मन लाग्छ आँफैसँग ।)
- जिन्दगीको मुल्य खोज्ने म । जीवन र मरणको अर्थ खोज्ने म मान्छे । अन्तिम क्षणमा कतै दुई पैसाको भाऊ पो नलाग्ने हो कि !? घरी घरि तर्सिन्छु पनि ।
(Yes, I was talking about my IDENTITY, identity of my future, identtity of my life n my death.I am walking through the path of nobody to the road of somebody. Hoping for the success.)
- झलनाथ खनालको देबि प्रशाद रेग्मीले किन थप्पड लगाए ? यसको उत्तर स्वयम झनाथ खनालले उनका समकालिन नेताहरुलाई जानकारी गराउनेछन र सचेत हुन आग्रह गर्नेछन भन्ने लागेको थियो तर उनले त उल्तै देबी प्रशाद रेग्मीलाई पो माफि दिए रे !?
मेरो आशा त झलनाथ खनालले गल्तिको सजाय पाएको महशुस गर्नेछन र जिम्मेवारीबोध गर्दै अन्य नेताहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछन भन्ने थियो तर अझै चेत खुलेनछ क्या रे !? अझै अर्को थप्पड नलागाइ भएको छैन ।
- Preaparing for adventurous journey!
- Walking through the path of nobody to the road of somebody!
- मीन बहादुर गुरुङहरुको आँशुमा सम्रिद्ध नेपालको दरिलो जग बसालौ ।
बि.बि.सी. नेपाली सेवा
Posted by Chandra Magar at 2:49:00 PM No comments:
गजल-पाइलाहरु चाल्दै जानू
नथाकेर नरुकेर, पाइलाहरु चाल्दै जानू ।
सफलताका सुनौला, यात्राहरु थाल्दै जानू ।
सोचे जस्तो हुन्न सधैं, गाह्रो साह्रो आइपर्छ
गोरेटोका अबरोध, पर्खालहरु ढाल्दै जानू ।
हुन्न सधै झिलिमिली, संघर्षका मोडहरु
अध्यारा ति झुपडीमा, दियोहरु बाल्दै जानू ।
रिस-राग इर्श्या भित्र , भेटिदैन परमात्मा
बरु दुखित टुटेका, मनहरु टाल्दै जानू ।
नजिक-टाढा दुरी हो , मन पर हुदै हुन्न
परिधिमा नबाँधेर , सेवाहरु पाल्दै जानू ।
Posted by Chandra Magar at 2:46:00 PM No comments:
सोधिन् भने निष्ठुरीले, नाता जोड्यो भनिदिनु ।
खोजिन् भने निष्ठुरीले, बाचा तोड्यो भनिदिनु ।
एकै तालमा एकै दिशा, पाईला चाल्न नसकेर
पछी पछी हिंड्न छाडि, बाटो मोड्यो भनिदिनु ।
सङै जिउने सङै मर्ने, कसमहरु खाए पनि
बाध्यताले जीवन साथी, अर्कै खोज्यो भनिदिनु ।
फल्ने फुल्ने भबिश्यको, स्वप्नहरु उमारेर
आँखा चिम्ली मनको मुना, अन्तै गोड्यो भनिदिनु ।
हाँस्दाहाँस्दै उनको सामु, आसुँ झर्थे कहिलेकाही
अतितलाई सम्झीएर, रुन छोड्यो भनिदिनु ।
Posted by Chandra Magar at 2:44:00 PM No comments:
आशा राख्नु घरको जग, खार्न आउँदैछुँ म ।
बाझो खेतमा हल गोरु, नार्न आउँदैछुँ म ।
छिमेकीको साँधपारि, देखें हरियाली
प्रगतिको बीज अब, छर्न आउँदैछुँ म ।
उम्रिदैथे टुसाहरु, शीत लागेछ कि!
बिकासको बेर्ना अब, सार्न आउँदैछुँ म ।
बचेँका ति मुना भन्दा, झार झाङिदैछन
गोड्मेल र जल अब, चार्न आउँदैछुँ म ।
उब्जाउ जती सखाप पार्छन्, सधैं बाँदरले
स्वाभिमानको बार अब, बार्न आउँदैछुँ म ।
Posted by Chandra Magar at 10:00:00 AM5comments:
- संगत गुणाको फल !
(यो भनाइ नै ध्रुब सत्य हो भन्नेमा मेरो पनि बिमती छ किन कि सबैमा सानो ठुलो खोट त अबश्य हुन्छ नै । मैले यहाँ अरुलाई दोष देखाउन र लगाउन खोजेको होइन र त्यस्तो अनैतीक कुरा गर्दैन पनि । यदी मैले त्यसो भनें भने चाँही 'नाच्न नजान्ने आँगन टेडो' हुनेछ । तर व्याबहारिक कुराहरुलाई हेर्दा र मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि यो सहायक कुरा अबश्य हो भन्ने चाँही म मान्छु । मुख्य कुरा चाँही आँफैमा नै भर पर्ने गर्छ ।
मैले कहिल्यै पनि चुरोत तानेको छैन र रक्सी पनि पिएको छैन भन्नुको अर्थ मेरो संगत निकै राम्रो थियो भन्ने होइन । स्कुल र कलेज पद्धा इन्जेक्सन हान्ने, नशामा झुम्ने मेरो थुप्रै साथीहरु पनि थिए । यहाँ मैले संगत र परिबेश सहायक हुन भन्न खोजेको मात्र हुँ । केही राम्रा भाईबैनिहरु नराम्रो संगतमा परेर अचानक फेरिएको पनि देखेकोछु । शायद आँफैले आफुमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकेर त्यसो भएको हुनसक्छ । यस सम्बन्धी मेरो आफ्नै अनुभवहरु कुनै दिन समय हुँदा अबश्य साटौला ।)
- Congrats to our team, The Champions of WMU. Hope u guys will continue this victory !
Thank you everyone for wonderful evening party ! 03 Dec,’10
- आज निकै बेर एक अपरिचित चिनिया केटीसँग हेराहेर गरियो । डा. रबिन्द्र समीरको सिद्धान्त अनुसार 'वन सेकेन्ड लभ' पर्यो क्या रे ! 05 Dec,’10
- कवी मित्र निश्प्रभ जीले 'बुलबुल' र 'उद्गार'मा दिनुभएको अन्तर्वाता सुन्ने मौका मिल्यो । त्यस्तै 'हार्मोनी' का केही गीतहरु पनि सुन्न पाउदा निकै खुशी लाग्यो । एक जना मित्रको हैसियतले म उहालाई एउटा बिहानी घाम भन्न रुचाएँ, जसले थुप्रै आशा र विश्वाशको संकेत गरिरहेछ । मलाई मन पर्ने साहित्यकारहरु देवकोटा, रिमाल, भुपी शेरचन, सरुभक्तहरुकै लाममा युवा पुष्टाका तर्फबाट अग्रपन्तिमा उभिनुभएकोछ । आगामी दिनहरुमा यसरी नै प्रगती र सफलताले निरन्तरता पाइरहोस् । हार्दिक शुभकामना ।
- दाडमा बोक्दा टाउकोमै हान्नेहरुसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन ।
- एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपालका लागि चाइनाको अबसरवादी निती र भारतको हस्तक्षेपकारी निती जती हानिकारक छ, त्यो भन्दा हामी नेपालीहरुको परनिर्भर र दास मनोब्रिती झन खतरानाक छ ।
‎- 'र' नाम नेपालको लागि अशुभ छ जस्तो लाग्यो । त्यसैले हो कि, आज 'र' प्रती अली बदी नै आक्रोसित छु । 'र' नामका मित्रहरुले जबर्जस्ती भए पनि माफ गर्नुहोला !
- Some frens are more than frens n some are more than enemies !
- सशस्त्र युद्धकालिन भिडियो क्लिपहरु हेर्दा अझै पनि आङ सिरिङ्ग हुदोरैछ । त्यतिखेर देश र जनताको मुक्तिका लागि मर्न र मार्न गैरहेका ति मान्छेहरुको मानसिकता अहिले अध्ययन गरिदा कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने उत्सुकता पनि जागेर आयो ।
- लुगा सिउने दमाइ दाइको छोराछोरी नाङै छन
फलाम थोक्ने सुनार दाइको आमास्वास्नी बुच्चै छन
देशको तातोमा ।
- निर्देशक ज्यु, यहाँले बनाउनु भएको 'देउता' फिल्म सानैमा हेरेर खुब मन पराएको थिएँ । म त पछीसम्म पनि 'शंखर' नै भएको थिएँ । त्यसो त तपाईंको निर्देशन अरुभन्दा अली बिशेष नै लाग्छन । अब कथाले मागेको 'हिरो' र 'भिलेन' भन्दा पनि युवाहरुले हेर्नै पर्ने एउटा फिल्म बनाउने कोशीस गरिदिदा हुनेथियो । हामीले देखे भोगेका समस्याहरुलाई केलाएर समाधान सहित, चाँही राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रेमिल,.. जुनसुकै कथामा भए पनि तर युवाहरुलाई नै फोकस गरेर केही संघर्ष र प्रेरणादायी मेसेज आउने खालको अली सान्दर्भिक बिषयमा ।
- मैले पहिले पनि कतै लेखेको थिएँ, बर्तमान अतितको साक्षी हो । हो, हिजो जे गर्यौ त्यसैले गर्दा नै हामीले टेकिरहेको यो धरातल निर्माण हुन सकेको हो । हिजोबाट अर्थात ईतिहासबाट पाठ सिक्ने र नयाँ भबिश्य अर्थात भोलीलाइ खुशीका साथ अंकमाल गर्दै अर्को सफलताको स्तम्भ खडा गर्नतिर लाग्नु पर्दछ । हिजोको बिछोडमा रुनु र भोलिको उमङमा रम्नुको मात्र अर्थ रहन्न । हिजो, आज र भोली मेरो लागि उत्तिकै प्रिय छन ।
मैले घोषणा गर्दैछु
अबैधानिक रेड लाईट एरियाबाट ।
(हामी पुष्टौ देखी यही नियती भोगिरहेछौ । अब एउटा पुष्टाले इमान्दारिपुर्बक त्याग नगरे सम्म यसबाट सजिलै छुटकारा पाउने पनि छैनौ । हामीसँग मात्र दुइटा बिकल्प छन, कि आफ्नै मात्र उज्ज्वल भबिश्य कि मुलुकको भाबी उज्यालो भबिश्य ।
यहाँहरुले कबितामा दिनुभएको समयका लागि हृदयदेखी नै आभारी छु । यहाँहरुको सकारात्मक प्रतिकृयाले मलाई केही लेखिरहन सदा मार्ग दर्शन गरिरहनेछन । यहाँहरुले दिनुभएको असीम माया नै मेरो लागि उत्साह र प्रेरणाका स्रोत हुन । आउने दिनहरुमा पनि निरन्तर यस्तै माया र प्रेरणाको अपेक्षा राख्दै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।)
- Happy Merry Christmas !
- चन्द्रे नेपाली अबश्य मरेर जाने छैन । मर्न चाहन्न तर मर्न डराउने मान्छे हैन चन्द्रे । बाँचुन्जेल डटेर सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य छ चन्द्रेसँग । आशा छ, चन्द्रे नेपालीले मौनता टोडेर राष्ट्रियताको गीत गाउँएछ, कोमाबाट बिउझिएर एकताको धुन बजाउनेछ । चन्द्रे नेपाली मरेर नजावस, चन्द्रे नेपालीहरु मलामी गएर उतैबाट अलप नभइदिउन् । कतै कतै बर्गिय, कतै जातिय, कतै धार्मिक त कतै भौगलिक बिखण्डनको गन्ध सुघ्नु नपरोस । नेपाल रहदा नेपाली रहन्छ भने नेपाली रहदा नेपाल रही रहनुपर्दछ ।
अब चन्द्रे सुखी, शान्त र साझा समाजको निर्माणमा लाग्नेछ ।
चन्द्रे यती सजिलै मर्ने छैन, यो त सम्भावित मृत्यु मात्र हो । जीवन बाँच्न सिक्दैछ चन्द्रे, मर्न सिक्दैछ चन्द्रे ।
- तमु ल्होसारको शुभकामना !
- May this new year brings rays of hope, be the source of prosperity n prevail peace in the world.
Wishing A warm Happy New year 2011 AD.
Hoping for the successful VISIT NEPAL 2011.
Posted by Chandra Magar at 9:07:00 AM No comments: